Mid Autum andro fiarahabana sy ny filazana avy Axnew
Ry rehetra: Masìna ianao,-katsaram-panahy ho nilaza fa Axnew Asehoy ao Shina ny Mid-Autumn Festival amin'ny faha-15 (Alakamisy) ny faha-18 (Alahady), Sep, 2016. Mba ampio ny mampita ity hafatra ity ho an'ny tehina, mpanjifa, mpamatsy sy antoko hafa manan-danja, raha ilaina. IT, Operation, Fitantanam-bola sy ny depar ...
Axnew manome kasaina capacitive mikasika mpanaramaso avy amin'ny 7 mirefy 32 santimetatra ny
Axnew manome samy hafa habe ny kasaina capacitive mikasika mpanaramaso avy mirefy 7, 8 mirefy, mirefy 8.4, 10 santimetatra, 10.4 mirefy, ka mirefy TP 21.5, 32 mirefy, sns. -Tsipiriany fotsiny amin'ny USB interface tsara, ka hiasa azy malalaka. Araka ny mpanjifa 'ny fangatahana, ny injeniera ekipa efa lasa hafa sakan'ny ...
Industrial mikasika tontonana pcs
Noho ny asa ny takelaka PC dia mahazo tsara kokoa sy tsara kokoa, maro ny orinasa saha no nanomboka nampiasa mora kokoa tontonana pcs, ary orinasa mikasika tontonana pcs tsena ihany koa nandalo ny lehibe fiovana, ny olona nanomboka mazàna mampitaha olombelona ny mikasika-efijery takelaka solosaina. Noho izany, ny ...
Ny fampandrosoana ny projective-capacitive efijery
Miaraka amin'ny popularization ny fironana, ny projective capacitive lamba no lasa malaza indrindra mikasika efijery ary hisolo tsikelikely ny resistive lamba ho toy ny voalohany mpanjifa safidy. Tombony ny capacitive efijery: 1. Tsy mora tratran'ny maranitra sy manao zavatra Scratching 2 ....
New tranonkala mpanaramaso indostrialy for AXNEW orinasa
Hampitoerina amin'ny taona 2009, Axnew soa aman-tsara lavitra ezaka nanorina fifandraisana amin'ny mpanjifa ao amin'ity orinasa tsipika maneho manerana izao tontolo izao. Ny mino, ny voalohany dia tsara tranonkala axnew.com fantatra amin'ny mpanjifa tsy tapaka isika. Ary ny vondrona faharoa manomboka ny tranonkala: https: // indostrialy-lcdmonitor ...
Ry tompokolahy ô, na Ramatoa: Masìna ianao, dia nilaza ny orinasa fa dia handeha hifindra tany vaovao Industrial trano ao amin'ny valan-javaboary, ary rehefa afaka Jan 1, 2015. New adiresy dia toy ambany: faha-4 Floor, Yinliantong Industrial Park, NO.460 AilianZhangbei, Longgang District , ShenzhenChina. Phone isa, Fax isany sy E-janvier ...
IR Touch miasa sy ny fampandrosoana
Infrared mikasika efijery lasa ny roa sosona sy ny endri-javatra maro-mikasika ny habe lehibe miseho lamba. Aoka isika hahafantatra bebe kokoa ny momba ny foto-kevitra mikasika IR Voalohany. Infrared Touch Screen dia mikasika endriny izay matetika napetraka teo anoloan'ny efijery ny fampisehoana. Ny toe dia tafiditra amin'ny pirinty circui ...
AXNEW maneho indostrialy Monitor
AXNEW maneho aminao nizara zavatra momba ny indostria Monitor. Ahoana no mifidy Monitor orinasa iray? Industrial LCD mpanaramaso ihany koa ny hanavaka ny tanjona ho LCD mpanaramaso ho an'ny solosaina. Na izany aza, ny tena indostria Monitor: hanomboka ary nihazakazaka mafy miasa tontolo, dia hiasa amin'ny zava-dehibe ...
8,0 "endriny manara-maso misokatra 800 × 600 amin'ny safidy mikasika
AXNEW Mahatonga ny Olona ho-mikitoantoana fahitana fampisehoana amin'ny 8.0''800 × 600 (4: 3) endrika ary aoka isika haneho anao raha liana ao. 8,0 '' LED backlight amin'ny endrika tsy manam-paharoa avy amin'ny injeniera sy hizara vaovao ny sasany aminareo. Ity vokatra malaza incorporates ny fanavaozana ny VGA interface tsara ...
Tara-masoandro vakiana mikasika efijery Monitor ny 7 sy 8 mirefy mirefy amin'ny endriny misokatra vahaolana
ny mpitantana ny 18-11-22
Tara-masoandro vakiana mikasika efijery Monitor ny 7 sy 8 mirefy mirefy misokatra amin'ny endriny vahaolana no tonga avy, ny ekipa dia lasa samy hafa ny famaritana ny mitovy voltages samy hafa, anisan'izany ny 5V sy 12V. Ireo vahaolana mety ho fampiharana manasa ivelan'ny trano, toy ny fijanonana rafitra, Vend ...
Fisaka ture famolavolana ny mikasika tontonana PC
Axnew mampiroborobo ny marina fisaka endrika ho 21 santimetatra capacitive mikasika tontonana PC, amin'ny feno HD 1920 × 1080. ny sasany hafa habe ny 13 santimetatra sy 15.6 mirefy amin'ny fepetra arahana full hd IPS avy ao amin'ny manaraka volana vitsivitsy. Tongasoa eto amin'ny hifandray aminay raha manana fanontaniana.
Industrial biraom-maso amin'ny malalaka temperatureto manohana ny mpanaramaso miasa mafy ao amin'ny tontolo iainana. Ny mpanaramaso dia amin'ny taona-EMC, tamin'ny taona-LVD, FCC, Rohs fanajana.